Indrisy… Mampahonena ny zava-nitranga, tetsy Mahamasina, nandritra ny fizaran’ny fanjakana izay heveriny ho sahaza ireto valalabemandry, ny alatsinainy hariva teo. Nifarombahana izay hany sisa tsy lanin’ny mpanana, namonoana tena mihitsy ny fisisihana sy ny fitsimponana izay kely latsaka.
Porofo miharihary ity tranga ity fa mahantra sy faraidiny ny vahoaka, izay toa tsy hitan’ny mpitondra akory na hitany ihany, saingy tsy raharahany. Tafiditra ao anatin’ny famonoana afo ataon’ny mpitondra ity hoe fizarana sakafo ity. Hatramin’izay, tsy nanao na inona na inona mba hanatsarana ny sosialim-bahoaka… Fe ankehitriny vao hoe ireny ny vary mora!
Na hosarontsaronana toy inona aza ny fihetsika toy itony, mazava sy miharihary fa may volon-tratra ihany ny mpitondra manoloana ny hetsi-bahoaka. Ny mampalahelo, heverina ho toy ny bado ny olona ka hilamindamina sy hihevi-tena ho sambatra rehefa mahazo iray lovia na indray mandrotsaka. Tsy vao izao koa ny vahoaka no natao tsinontsinona toy izao ka tsy misy ho latsaka anaty haraton’ny fanangolena moramora foana.
Tsy tokony hijanona amin’ny fitserana sy ny fihetseham-po fotsiny, izay tsy mitondra mankaiza, koa anefa fa hamakafaka sy handalina. Efa fantatra ny lesoka, izay handraisan’ny mpifidy anjara goavana ny fanarenana azy. Na ho ela na ho haingana, tsy maintsy hisy ny fifidianana, iankinan’ny hoavin’ity firenena ity.
Ho an’ny ankehitriny, ampy hitsarana ny fitondrana ho tsy mahefa ny fahantran’ny vahoaka entiny. Tsy vitan’ny hoe tsy mahavita na inona na inona fa tsy miraharaha, toy ny tsy manam-panahy mihitsy ka na eo aza ilay fitenenana hoe “aleo mahia ondry andrasana toy izay mahia olom-pehezina”, ny ho any am-paosiny ihany no fantany. Samia mieritreritra!